Hello Sayarwon Panel မှ ရေးသားသည်။2ရက် အကြာက တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ဒီလို တစ်လတည်း ရာသီ ၂ခါလာတာ ရာသီသွေးဆင်းတဲ့ ရက်များတာနဲ့ မတူပါဘူး။ ပုံမှန်ဆို ၂၈ ရက်ရာသီစက်ဝန်းရှိတဲ့ သူက ၂၈ ရက်ကြာရင် တစ်ခါ၊ ၃၀ ရက်စက်ဝန်းရှိတဲ့ သူက ၁လ ကြာရင် တစ်ကြိမ် ရာသီ လာပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တချို့အမျိုးသမီးတွေက ၂၂ရက်တစ်ခါ ရာသီလာကြတာရှိပါတယ်၊၊ ရာသီစက်ဝန်းတိုတဲ့သူတွေပါ၊၊ ဒါကလည်း ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါပဲ၊၊ ၂၂ရက်တစ်ခါ ရာသီလာတဲ့သူတွေ ရှိသလို ၃၅ရက်လောက်နေမှ ရာသီလာတဲ့သူလည်း ရှိပါတယ်၊၊ ၂၂ရက်တစ်ခါ ရာသီလာတဲ့သူဆိုရင် တချို့လတွေမှာ ၁လတည်း ၂ခါလာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်၊၊ လအစမှာ တစ်ခါလာပြီး လကုန်ရက်မှာ တစ်ခါလာတာမျိုးပါ၊၊
ရောဂါတစ်ခုခုကြောင့် တစ်လထဲ ရာသီ ၂ ခါ လာစေတဲ့ အကြောင်းအရင်းများ ။ ။
ဒါတွေ အားလုံးက တစ်လထဲ ရာသီ ၂ ခါ လာစေတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ရံဖန်ရံခါ တစ်လကို ၂ကြိမ်လာတာမျိုးက ဖြစ်တတ်ပေမယ့် လတိုင်း ၂ကြိမ်လာနေရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသင့်နေပါပြီ၊၊ အကြောင်းအရင်းကို သိမှ ကုသလို့ရမှာလေနော် ။ ။
What Causes Two Periods in One Month? https://www.healthline.com/health/womens-health/two-periods-in-one-month#causes Accessed date 4.3.2019
Why do I have two periods inamonth? https://www.medicalnewstoday.com/articles/322252.php Accessed date 4.3.2019
Is it OK to Get My Period Twice in One Month? https://kidshealth.org/en/teens/plus-periods.html Accessed date 4.3.2019
Menstrual cycle: What’s normal, what’s not https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/womens-health/in-depth/menstrual-cycle/art-20047186 Accessed date 4.3.2019
Periods and the pill https://www.nhsinform.scot/healthy-living/contraception/the-pill/periods-and-the-pill Accessed date 4.3.2019